भारत-चीन विवाद : सैन्य क्षेत्रमा भारत र चीनमा को बलियो ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
भारत-चीन विवाद : सैन्य क्षेत्रमा भारत र चीनमा को बलियो ?
access_time२०७७ साल जेष्ठ १५ गते, बिहीबार ०६:२२ PM chat_bubble_outline Comments folder_open संसार मुख्य खबर​
एजेन्सी । नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच लद्दाख मामिलामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपालमा जस्तै भारतले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा पनि विवादीत ठाउँमा सडक निर्माण गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो ।
अहिले फेरि चीनसँग भारतको दूरी बढेको छ । पूर्वी लद्दाख र सिक्किममा पछिल्लो एक महिनामा पटक पटक झडप भएको छ । दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आआफ्ना देशका सैनिकसँग सीमा विवादका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
सैन्य क्षेत्रको तुलना गर्दा त्यस देशले बार्षिक लगाउने बजेटबाट सुरु गर्नुपर्छ । चीनले सन् २०२० मा रक्षा बजेट १ सय ७९ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्टाएको छ । भारतले बार्षिक बजेट ७० अर्ब डलर मात्रै रक्षा क्षेत्रमा छुट्टाएको छ ।
दुई देशबीचको सैन्य क्षेत्रको तुलनामा कुन बलियो ?
ग्लोबल फायरपावर डटकमले अध्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा दुवै देशबीच धेरै भिन्नता भने देखिदैँन । तर धेरै कुरामा चीन अगाडि देखिन्छ । भारत सैन्य क्षेत्रको उपलब्धतालाई हेर्दा चीनभन्दा धेरै पछि छ ।
जनशक्तिको हिसाबले हेर्दा चीनमा २६ लाख ९३ हजार पूर्ण लडाकु जनशक्ति छ भने भारतमा ३४ लाख ६२ हजार ५ सय सैनिक विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
सैन्य क्षेत्रमा विमानको अवस्थामा चीन धेरै अगाडि छ । विभिन्न अत्याधुनिक जहाजको संख्या चीनमा ३ हजार १ सय ८७ छ भने भारतमा २ हजार ८२ मात्रै रहेका छन् ।
सैनिक हेलिकप्टरमा चीनले हालैमात्र मानवरहित हेलिकप्टरसमेत प्रयोगमा ल्याएको छ । चीनमा १ हजार ४ हेलिकप्टर रहेका छन् भने भारतमा ६ सय ९२ हेलिकप्टर सैन्य क्षेत्रमा प्रयोगमा छन् ।
फाइटर जहाज चीनसँग १ हजार २ सय २२ छ भने भारतसँग ५ सय २० मात्रै रहेको छ । त्यस्तै आक्रमणमा प्रयोग हुने विमान भारतसँग ६ सय ९४ रहेको छ भने चीसँग १५ सय ६४ तथा हेलिकप्टर भारतसँग जम्मा १७ र चीनसँग २ सय ८१ रहेको छ ।
बिहारमा बुधबार चट्याङ लागेर १२ को मृत्यु
अमेरिका र चीन दुवैपक्षबाट एक अर्काविरुद्ध कारवाही